Gadzira kugoverwa kweLinux kutsigira sangano remagandanga | Linux Vakapindwa muropa
Kubhadharira mudzidzi weAmerica kutsigira ISIS uchishandisa mahara software.
Mazuva mashoma akapfuura Ndakavaudza kesi yakabudirira yekushandurwa kwepepanhau reIndia kubva mukushandiswa kwesoftware yepropathio kusunungura software Nhasi ndinofanira kunyora nezve imwe yakasiyana zvachose, asi zvakadaro, inoratidza kushomeka kweyakavhurika sosi.
Mudzidzi wemakore makumi maviri okuberekwa mudzidzi kutarisana nemhosva yekutsigira sangano rinoonekwa segandanga. Imwe yemhando dzetsigiro iyoyo yaive gadzira kugovera kweLinux kunoenderana neGentoo kuti ishandiswe mushandirapamwe wesangano reISIS. Kana iri awanikwe aine mhosva anofanira kushanda kusvika makore makumi maviri kubva mutirongo.
Pasina kupinda muhurukuro dzezvematongerwo enyika, chokwadi chekuti anoenda kujeri zvinonyadzisa. Kubva kuverenga chirevo chekutonga chemumiriri weFBI anotarisira nyaya iyi, zvinoita sekunge murume mudiki chingave chakakosha kuwedzera kune chero chirongwa sosi yakavhurwa.
Kana iyewo mumiriri akasarudzika angave anotora yakaipa sekuparadzira software yemahara. Aya ndiwo marondedzero aunoita chinonzi Gentoo
Gentoo Linux ndeye yemahara inoshanda sisitimu yemakomputa inoitika seyakagadziriswa kwazvo yeLinux, uye "Linux" ndeye yemahara inoshanda sisitimu yemakomputa inopa huwandu hwakasiyana hwekushanda.
1 Nei uchigadzira kugoverwa kweLinux uye nei uchigona kupedzisira wave mutirongo?
1.1 Kugoverwa kwaLinux Osadzinski
Nei uchigadzira kugoverwa kweLinux uye nei uchigona kupedzisira wave mutirongo?
Rega ndikutaurire iwe kune vevanyori veiyi nyaya inoshamisira yekushandisa kwemahara software. Kune rimwe divi isu tine Akakosha Mumiriri Phillip Viggiani uyo anoshanda muFBI kubvira 2016. Kune rimwe divi tinaro Thomas Osadzinski, mudzidzi 20-gore-rekare uyo anga asina zano riri nani kupfuura vagovana mazano ako ekuparadzira ISIS mameseji nevamiriri vekunze yeFBI.
ISIS ndicho chirevo muChirungu che Islamic State yeIraq uye Levant. Icho chiri pamusoro sangano revapanduki inotungamirwa nedudziro yeheterodox yebazi reIslam.
Shamwari yedu Viggiani zvine hunyanzvi inotsanangura chinonzi pro-ISIS media agency chii
Iyo Pro ISIS midhiya sangano iri risingazivikanwe pro-ISIS midhiya sangano iro rinogadzira pro-ISIS midhiya zvemukati kuti zvigoverwa pamhepo kusanganisira pasocial media.
Kubatana kwekutanga kwaOsadzinski nepro-ISIS media media yaive gadzira python script. Nechinyorwa ichi mudzidzi aigona kurodha pasi, kupatsanura uye nekuisa zvirimo yeakaundi nhoroondo dzeboka en otomatiki. Aive zvakare mutariri we ugozvigovera pane ako wega nhoroondo maakaunzi. Kwete kugutsikana nazvo, Iwo mavhidhiyo akaiswa mukati mekugadziriswa. Ivo vane chinononoka kubatana (kana yakaipa data data) vanogona kuwana zviri nyore ivo vakareruka.
Chokwadi chinoda kuziva ndechekuti mumiriri weFBI anotsanangurira mutongi pfungwa dzakareruka senge yekudyidzana pasocial yakaita sekunge Rukudzo rwake rwasvika nezuro kubva kuMars, asi hapana kwaanotsanangudza pfungwa yechinyorwa.
Osadzinski akadzidza akati wandei zvine chekuita nekombuta kuyunivhesiti, kusanganisira Python kune programmers, Ruzivo masisitimu, Anoshandiswa manetwork, uye chengetedzo. Zvakare Computer Science 1 uye 2.
Kugoverwa kwaLinux Osadzinski
Muna Kurume gore rino, jaya iri rakataurirana pasocial network neyemuchivande FBI mumiriri uyo waakatenda kuti ndiye ISIS anonzwira tsitsi. Ikoko akazivisa:
Ndiri kuzotanga yakakosha purojekiti nyowani yekuvandudza yetsika vhezheni yeGentoo Linux kunyanya kune veISIS vatsigiri. Ichashanda pane chero komputa uye ichave yakajeka, inokurumidza uye yakachengeteka.
Gare gare akatumira chinongedzo cheboka kutaura ndokumutsanangurira kuti anozoposta ma updates ipapo kuitira kuti hama dzinovimbwa chete ndidzo dzinovaona. (Uye vanovanda veFBI vamiririri).
Mupomeri akatsanangura kuti kugovera kutsva zvinongoshanda chete kutarisa pasocial network. Akavimbisa kuti:
Izvo zvishoma zvinhu zviripo mune yekushandisa system, zvakanyanya kuomarara kubira.
Nehurombo, kunyangwe Osadzinski akatsanangudza kune vaaibata navo hunhu hwesisitimu nyowani yekushandisa, Viggiani nkana kuona sezvakakodzera kuvaisa mumhosva. Sezvo, zvirinani kwemakore makumi maviri anotevera, zvakamuomera kuti aoneke muDistrowatch, isu tinogona kungofungidzira.
Nekudaro, kana iwe uri kuronga kuita chimwe chinhu chakaipa pakombuta yako, uye iwe usiri kuda kuti zvisaririra zvirambe zviripo, ndinokusiira iwe nezano iri kubva kuna Osadzinski iro FBI rinogoverana nesu:
Kana iwe uine mafaera iwe ausingakwanise kunyorera, tora iyo Bleachbit chirongwa. Paunodzima faira muWindows rinoenda kubhinendi rekudzokorora. Asi kunyangwe iwe ukaidzima kubva mumarara, inogona kupora. Bleachbit inoperekedza chinzvimbo chedisiki nemazero izvo zvinoita kuti zvikone kuitora.
Bleachbit yakavhurwa sosi uye inowanikwa yeWindows, Linux neMac
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Gadzira kugovera kweLinux. Zvinogona kukutorera makore makumi maviri mujeri
Indian (nyika), kwete maHindu, havasi maIndia ese anotevera chiHindu (chitendero) ...
Iboka remagandanga echiIslam rinouraya nekupisa vanhu vapenyu pamberi pekamera yeterevhizheni, "boka revapanduki"? Zvinoita sezvakanaka kwauri here kuti imwe nzira kana imwe inogona kubatana kuparadzira ideology yeimwe yeanonyanya kuteura ropa rougandanga hwazvino? Unoziva here kuti ISIS chii? Ini ndinofunga zvakanaka kuti vakaisa makore makumi maviri ekubatana nemapoka emagandanga.
Ndinoda kuti vaverengi varege kutsvaga zvinoreva zvakavanzika muzvinyorwa zvangu. Ini handisi Nostradamus kana iye munyori webhuku raZvakazarurwa.
Ini ndakanyatso kudzora kushandiswa kwezvipikisheni zvinokodzera kudzivirira kuti chinyorwa chisazadzwe nemazita asina chekuita mune tekinoroji blog.
Pandinotaura izvo ndinofunga zvinonyadzisa kuti ari mutirongo, imhaka yekuti iye ane makore makumi maviri-munhu ane tarenda rakakura uyo, dai akange akarishandisa pane chimwe chinhu chinovaka, angadai akaita zvakanaka zvakawanda. .
Zvakanaka, zvinosuwisa ndinofunga kuti jaya iri raiziva, sekuziva kwedu tese, chii chiri ISIS nezvedambudziko raunozviisa mariri. Zvimwe zvese zvinouya zvega. Kwaziso, chinyorwa chakanaka.
pakadai ungadai wakatsanangura, makomendi ako anomutsa kufunga kuti unorega zviito zvemusoro wenyaya.
Chinyorwa chakanaka. Zvinhu zviviri chete zvidiki:
1) "asi hapana kwazvinotsanangudza pfungwa yechinyorwa"
Ini ndinofungidzira kuti kwete xq «script» muChirungu ishoko rekushandisirwa («script» yemuvhi is a «script» x muenzaniso), uye kwete zvechetere «technical» sezvinoitika kune avo vanoziva iro izwi mumakomputa munda x kana kutaura Chirungu.
2) mutongo unokwanisika wemakore makumi maviri hausi wekugadzira linux, mune iyi kesi ndeyekubatana neISIS. Izvo zvakafanana necdo mumwe munhu anotarisana nemhosva x achiziva kubata tsotsi raidiwa.
Ini ndinokuudza zvandataura paTwitter. Ini ndakatora chinetso kuti ndiverenge kupomedzerwa pane kugadzira kopypaste yechinyorwa cheZdnet. Ini ndakakodzera kuisa bhataniit.
Nezve iyo script inogona kunge iri, asi zvinotora dambudziko kuti utsanangure pasocial network.
Iyo yekutamba yevhidhiyo chikuva, "Google Stadia" yakatotanga kuvambwa